လုံလဲရ်ရွာ၊ ထန်တလန်မြို့နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 22°54′09″N 93°13′38″E﻿ / ﻿22.9023990631104°N 93.2272033691406°E﻿ / 22.9023990631104; 93.2272033691406ကိုဩဒိနိတ်: 22°54′09″N 93°13′38″E﻿ / ﻿22.9023990631104°N 93.2272033691406°E﻿ / 22.9023990631104; 93.2272033691406
လုံလဲရ်ရွာ(အင်္ဂလိပ်: Lungler)သည် ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၊ လုံလဲရ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၁၆၄၅၇၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုံလဲရ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၇၃ ဦး၊ မ ၇၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၀၃ ဦး နေထိုင်သည်။ 
၂၀၂၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်တွင် ချင်းအမျိုးသားတပ်/ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်(ထန်တလန်) ပူးပေါင်းအဖွဲ့က လုံလဲရ်ရွာအနီးတွင် မဆုတ်တမ်းခံတပ်ပြုလုပ်ထားသော တပ်စခန်းတခုကို တိုက်သည်။ စစ်တပ်မှ လေကြောင်းပစ်ကူပေးသဖြင့် ဆုတ်သည်။ ၁၁ ရက်တွင် ညတိုက်ပွဲနွှဲရာ စခန်းကို သိမ်းနိုင်လိုက်သည်။  ၁၂ ရက်တွင် စစ်တပ်မှ လေကြောင်းထောက်လှမ်းမှု ပြုသည်။ ၁၀ ရက်နေ့ကပင် ရွာရှိလူကုန် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့၎င်း၊ အခြား နေရာများသို့၎င်း စစ်ဘေးရှောင်ကြ၏။ 
↑ "စစ်ကောင်စီ၏ လုံလဲရ်တပ်စခန်းကို CNA/CDF-ထန်တလန် ပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်၊ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၁၂ ဦးသေဆုံး". Mizzima Daily. 2021-09-12.
↑ "လုံလဲရ်ရွာအခြေစိုက် စစ်ကောင်စီအခြေစိုက် တပ်စခန်းကို CNA/CDF–Thantland သိမ်းပိုက်". DVB Burmese. 2021-09-12.
လုံလဲရ်ရွာ၊ ထန်တလန်မြို့နယ်၏ ပတ်ဝန်းကျင် နေရာများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လုံလဲရ်ရွာ၊_ထန်တလန်မြို့နယ်&oldid=683846" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။